Ọrịa Crohn. Ndị a bụ ihe kpatara na mgbaàmà nke ọrịa a - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Ọrịa Crohn. Ndị a bụ ihe kpatara na mgbaàmà nke ọrịa a - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY	 On June 13, 2021
N'iji eriri afọ nke eriri afọ, ọrịa Crohn na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị France 140. Ọrịa a nke na-emetụta usoro eriri afọ nwere nsogbu ndị na-eyi ndụ egwu mana enweghị nyocha ọzọ na ya.
Ọrịa Crohn bụ ọrịa a na-amataghị
Ọ bụrụ na ọrịa Crohn anaghị agbasa na mgbasa ozi, ọ bụ n'ihi na ozi dị ntakịrị. Ihe kpatara ya ? A ka nwere obere nyocha ndị ọzọ gbasara ọrịa a.. Nke a bụ ihe kpatara na ndị nyocha amatabeghị kpọmkwem ihe nwere ike ibute ya na ihe ga-agwọ ya. Ọdịdị ahụike nke na-eme ka o sie ike ịkwado ndị ọrịa na-arịa ọrịa a na-egbu mgbu.
Kedu ihe na-esi na ọrịa Crohn apụta?
Ọ bụ ezie na ọrịa a na-apụtakarị na obere eriri afọ na eriri afọ, ọ nwere ike imetụta akụkụ ọ bụla nke akụkụ eriri afọ, ụzọ nke na-amalite site na labia ruo na ike. Mana nke a anaghị emetụta akụkụ niile nke sistemụ a n'ihi na ọrịa ahụ nwere ike ịhapụ ụfọdụ n'ime ha. Ogo nke ọrịa a dịgasị iche site nro ruo na nkwarụ na o nwere ike ibute nsogbu na-eyi ndụ egwu n'ọnọdụ ndị kasị njọ.
Kedu ihe kpatara ọrịa Crohn?
Maka oge a, ndị nyocha nwere obere ozi gbasara ọrịa a. Ihe e ji achọpụta ihe kpatara ndị sayensị bụ ihe ndị dịka mgbochi, mkpụrụ ndụ ihe nketa kamakwa ihe na-akpata gburugburu ebe obibi. Dabere na ọnụọgụ sitere na Crohn's na Colitis Foundation, 20% nke ndị nwere ọrịa a nwere nne na nna, nwanne nwoke ma ọ bụ nwatakịrị na-arịa ọrịa a. Nke a ọmụmụ ebipụtara na 2012 gosikwara na ọnọdụ ụfọdụ na-emetụta ịdị egwu nke ihe ịrịba ama ndị na-egosi ọrịa Crohn. N'ime ha, ise siga, afọ, itinye aka nke ikensi na ọnọdụ a kamakwa oge nke ikpeazụ. N'ihe banyere ịkwụsị ise siga, ụfọdụ nnyocha na-egosi na e-sịga nwere ike ịbụ ihe na-emerụ akpa ume dị ka sịga ọdịnala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepụ ụdị ọgwụ ọjọọ a, anyị na-atụ aro ka ị chọọ enyemaka nke onye ọkachamara.
Kedu ihe bụ nsogbu nke ọrịa ọrịa afọ a?
Ndị na-arịa ọrịa a nke na-emetụta otu ma ọ bụ karịa akụkụ nke akụkụ eriri afọ (IGT) nọ n'ihe ize ndụ nke ịmepụta mgbaàmà siri ike nke na-emetụta usoro a. Ndị nwere ọrịa Crohn nọ n'ọnọdụ dị elu nke ibute ọrịa nsia site na nje bacteria. Ndi mmadu a nwekwara ike ịmalite nje, nje na nje nwere ike ịkpata ezigbo nsogbu. Ọrịa a kamakwa ọgwụgwọ ndị na-esi na ya pụta nwere ike imetụta nsogbu. Otú ọ dị, usoro ahụ ike na-ewusi ike dị mkpa iji chebe megide ndị ọrịa. Maka booster, nri ụfọdụ nwere ike inyere gị aka, karịchaa ndị nke nwere vitamin D. Mgbe emetụtara ya, usoro nchekwa a na-akawanye njọ na-ebute nsogbu na-eyi ndụ egwu. Nke a bụ ikpe maka ndị metụtara yist ka ha na-emetụta ọ bụghị naanị ngụgụ kamakwa akụkụ eriri afọ. Ọ bụ n'ihi nke a ka a ga-eji mata ndị na-efe efe n'oge ka ha nwee ike iji antifungals gwọọ ha n'oge. Mgbe a chọpụtara ndị a n’azụ oge, ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. Mgbaàmà nke nwere ike igbochi ma bute ezigbo nkwarụ maka ndị na-arịa ya.
Kedu ihe bụ mgbaàmà nke ọrịa Crohn?
Ihe ịrịba ama nke ọrịa a nwere ike ịnwụ na-apụta n'ọtụtụ oge nwayọ nwayọ. Mgbaàmà nwekwara ike ịka njọ na oge. Mgbe ụfọdụ ndị na-arịa ọrịa Crohn nwere ike ịhụ ihe ndị a na mberede ma ha nwere ike mebie ahụike ha nke ukwuu. N'agbanyeghị nke a, ndị a bụ nsonaazụ ndị a na-ahụkarị obere. Ihe ịdọ aka na ntị banyere ọnọdụ a siri ike bụ akpịrị afọ, ọbara na stool, afọ ọsịsa, ike ọgwụgwụ, ahụ ọkụ, ụkọ nri, ụkọ ọnwụ, na-eche na eriri afọ adịghị efu mgbe ha gafesịrị ngagharị. Ndị nwere ọrịa Crohn na-enwekwa mmasi a na-enwekarị nsị. Mgbaàmà ndị a yiri nke nsị nri, nke nfụkasị ahụ, na afọ iwe. N'ihu otu ma ọ bụ karịa n'ime ha, kpọtụrụ dọkịta nwere ike ịkọwa ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Kedu ihe bụ ihe nrịba ama nke ọrịa a?
Mgbe ihe mgbaàmà ndị ahụ e kwuru n'elu, ha nwere ike ịka njọ ma bụrụ nsogbu ndị na-agwụ ike. Mgbe ọrịa Crohn pụtara, onye nwere ya nwere ike ịnwe ọrịa pianla, akụkụ ahụ nke akụkụ ahụ ike. Nke a na-akpata ihe mgbu kamakwa drainage nke ike. Nsogbu ndị a nwere ike soro ọnya, nke nwere ike imetụta akụkụ eriri afọ dum, yana mbufụt nke nkwonkwo na anụ ahụ. Ọzọ sequelae dị ka ume iku ume ma ọ bụ ikike belatara na-emega ahụ n'ihi anaemia na-esite na ọrịa a. Ndị a niile bụ ihe mgbaàmà siri ike nke chọrọ nchọpụta na nchoputa oge mbụ iji gbochie ha. N’oge a, dibia nwere ike ideputa ogwu iji gbochie ha idi ojoo.
Kedu ka esi achọpụta ọrịa Crohn?
Ebe ọ bụ na ndị ọkà mmụta sayensị enweghị ozi zuru oke banyere ọnọdụ a, ọ nweghị nyocha ọ bụla na-enye ndị dọkịta ohere ịchọpụta ya. Ọ bụ ya mere site a mkpochapu ihe ndi ozo nwere ike ime ka ndi okachamara nwere ike ichoputa ya. Usoro a siri ike na-eme ka o kwe omume ịsị na mmadụ na-arịa ọrịa Crohn, site na iwepu echiche niile nke usoro ọgwụgwọ nke na-eweta otu mgbaàmà ahụ. Iji chọpụta ọrịa Crohn, ndị dọkịta na-eme ọtụtụ nyocha dị ka nyocha ọbara, nyocha stool ma ọ bụ endoscopy iji nweta foto nke TGI. Ndị ọkachamara nwekwara ike ịtụ CT scans ma ọ bụ MRI maka nkọwa ndị ọzọ gbasara sistemụ a. Ya mere, ha ga - enwe ike ịhụ site na ịpụ n'ihu anụ ahụ nwere ike ibute nsị nke nwere ike ibute ọnọdụ a nke a ga-emeso n'oge iji zere nsogbu ndị ọzọ. Nnwale ndị a niile ga-ewepu ihe ndị ọzọ dị na ngosipụta anụ ahụ ndị a ma chọpụta ọganihu nke usoro ọgwụgwọ.
Kedu ka esi agwọ ọrịa Crohn?
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe siri ike ma na-agwụ ike maka ndị ọkachamara ịchọpụta ya, enweghị ọgwụgwọ maka ọrịa na-enweghị ngwọta nke ọrịa Crohn. Otú ọ dị, enwere ike ijikwa mgbaàmà ya na onye nwere ya nwere ike ibi ndụ nke ọma ma ọ bụrụ na achọpụta ya n'isi. Na ezi ihe kpatara ya, enwere ọtụtụ ọgwụgwọ iji belata ogo na ugboro ole mgbaàmà. Ebumnuche: Iji zere ọdịdị nke nsogbu nke nwere ike imebi. Ya mere, ndị dọkịta na-enye ọtụtụ nhọrọ ọgwụ dị ka ọgwụ mgbochi mkpali ma ọ bụ ọgwụ afọ ọsịsa iji lụsoo mgbaàmà nke ọrịa Crohn ọgụ. Ekwesịrị izere ọtụtụ nri maka ndị na-arịa mbufụt. Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ dị elu gụnyere ngwaahịa ndị na-eme ka ihe nchekwa ahụ sie ike. Mgbe ahụ, dị ka ọ na-arịa ọrịa ndị na-adịghị ala ala, a na-ehiwe ụdị ngwakọta ọgwụ dịgasị iche dabere n’ihe onye ọrịa mere. Na ezi ihe kpatara ya, onye ọ bụla n’ime ha nwere mgbaàmà dị iche iche, akụkọ ihe mere eme na ogo nke ọrịa ahụ. Nhọrọ ndị ahụ dịgasị iche iche dabere na nzaghachi nye ọgwụgwọ.
Kedu ụdị ọgwụ dị iche iche edepụtara?
E nwere ụdị ọgwụ abụọ na-egbochi mkpali nke ndị dọkịta nyere maka ọrịa Crohn. N’etiti ha: 5-aminosalicylates na corticosteroids ọnụ. Ndị a bụ usoro ọgwụgwọ mbụ maka ọrịa a. A na-enye ọgwụ ndị a edepụtara ozugbo a chọpụtara ọrịa ọrịa eriri afọ mgbe onye ọrịa gosipụtara ihe ịrịba ama dị nro nke ọnọdụ a. Ọ bụrụ na ọdịdị nke mgbaàmà kachasị njọ, edepụtara corticosteroids maka obere oge. Iji dozie usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, nke na-emegharị ahụ na ọnọdụ a, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ndị na-agba ọgwụ mgbochi. Ọgwụ ndị a na-elekọta nchebe nke okike nke nwere ike ibute mbufụt mgbe ha na-eme ihe na oke ọsọ ọsọ. Ya mere, ha na-egbochi mmeghachi ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, nke nwere mmetụta nke mbenata mgbaàmà nke ọrịa Crohn. E dekwara ọgwụ mgbochi dị ka akụkụ nke ikpeazụ a site n'aka ụfọdụ ndị dọkịta. Mmetụta a tụrụ anya ya: belata nsị mmiri ma gwọọ ọrịa fistula, nsonaazụ nke ọnọdụ a nke na-awakpo TGI. Ndị a bụ njikọ na-adịghị mma n'etiti anụ ahụ. Mmetụta nke ọgwụgwọ a bụkwa neutralization nke nje ọ bụla nwere ike ibute mbufụt ma ọ bụ ọrịa. Ọgwụ ndị enwere ike ịdebanye n'ụzọ zuru oke ebe ọ bụ na enweghị ọgwụgwọ nwere ike ịlụ ọgụ na isi iyi megide ọrịa a nwere ike ịnwụ. Mgbe ụfọdụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ọgwụgwọ dabere na ihe ndị sitere n'okike, na-enye ọgwụgwọ maka ndị ọrịa. Ọgwụ ndị a na-emepụta iji gbochie ndị na-edozi protein ndị na-akpalite mmeghachi omume mkpasu iwe kpọmkwem.
Gini mere ndi oria ji acho ime mgbanwe nri?
Iji nyere ndị ọrịa na-arịa ọrịa a aka ịghara inwe mmeghachi omume mkpali, achọrọ ọtụtụ mgbanwe na ịdị ọcha nri. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nri anaghị ebute ọrịa, nri nwere ike ibute oke mgbaàmà. Ọ bụ n'ihi nke a ka a ga - eji nye gị iwu nri ga - enyere gị aka. Ọ bụrụ na nchọpụta nke ọrịa Crohn, dọkịta ahụ na-ezo aka na onye na-eri nri na-enyere onye ọrịa aka ịghọta mmekọrịta dị n'etiti usoro iri nri na ọrịa nke na-akpata oke mbufụt. Onye ọkachamara a nwere ike ibu ụzọ gwa onye ọrịa ka o debe ihe ndetu nri iji hụ mmetụta nke nri ụfọdụ na mgbaàmà nke onye ọrịa ahụ nwetara. N'ihi ya, ọ nwere ike iduzi ndị nke a ka ọ bụrụ ihe ha ga-eri ma ọ bụ ihe mgbochi ha. Mgbanwe ndị ahụ mere ka ọ dịkwuo mfe inweta nri ndị ọzọ na-edozi ahụ site na ịmachi ngosipụta anụ ahụ nke ọrịa a.
Gerywa ahụ: ọgwụgwọ ga-ekwe omume maka ọrịa Crohn
Ọ bụrụ na ndị ọkachamara na-atụ aro usoro ọgwụgwọ na usoro nri ọhụrụ mgbe niile, enwere ike ịtụle ịwa ahụ. Dabere na ntọala Crohn & Colitis, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 75% nke ndị ọrịa ga-achọ ịwa ahụ n'oge ụfọdụ na ndụ ha. Omume dị mkpa ma ọ bụrụ na enweghi mmelite ọ bụla. N'ime ịwa ahụ ndị a, ụfọdụ gụnyere iwepụ anụ ahụ TGI mebiri emebi n'ihi ọrịa Crohn ma ọ bụ njikọta akụkụ ahụ ike nke usoro a dị mkpa na ahụ. Usoro ndị ọzọ gụnyere ịmezi anụ ahụ mebiri emebi, ijikwa anụ ahụ mebiri emebi, ma ọ bụ ịgwọ ọrịa ndị miri emi. Usoro ndị dị mkpa maka nkasi obi nke onye ọrịa.
Kedu ihe bụ nri nke ọrịa Crohn nyere iwu?
Ọkachamara na-atụ aro usoro iri nri ọhụụ maka ịhazi mgbaàmà nke ọrịa Crohn. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ nri nwere ike ịrụ ọrụ maka otu onye ọrịa mana ọ bụghị maka ọzọ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọrịa a na-emetụta akụkụ dị iche iche nke TGI nakwa na ọ dịgasị iche dịka onye ahụ si dị. Ọ bụ n'ihi nke a na nlekọta nke ọnọdụ a na-ewe ogologo oge na ndị ọrịa na dọkịta ọ bụla ga-achọ ịmata ihe nhọrọ kacha mma dị. Dị ka akụkụ nke nri, enwere ike iwepụ ụfọdụ nri iji wepụ ihe ịrịba ama nke ọrịa ahụ ma belata oke ha. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-arịa ọrịa a na-adịghị ala ala chọrọ nri nri juputara na fiber kamakwa protein. Ndị ọzọ, n'ụzọ dị iche, na-ata ahụhụ n'ụdị nri a n'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị a nwere ike ịka njọ nke TGI. N'okwu a, enwere ike igbochi ma ọ bụ machibido nri ndị nwere ọgaranya na fiber. Banyere oriri nke abụba, nke ikpeazụ a nwere ike ịkpata afọ ọsịsa, ihe mgbaàmà nkịtị maka ndị na-arịa ọrịa a, nke na-egbochi nsị nke lipids ndị a. Ndị na-eri nri nwekwara ike ịkwado na ịmachi ngwaahịa mmiri ara ehi na usoro nri n'ihi na ọnọdụ a nwere ike ime ka mgbaze sie ike. N’ihi nke a, ndị ọrịa nwere ike ịta ahụhụ n’ime afọ, afọ ọsịsa ma ọ bụ ọbụlagodi afọ mgbu. Ọtụtụ mgbaàmà akọwapụtara maka ọrịa Crohn. Ndi mmadu anabataghi Lactose na-echegbu onwe ha. N'ikpeazụ, hydration dị mkpa maka ndị ọrịa a n'ihi na ike ịmịkọrọ mmiri na-emetụtakwa, nke nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ nke na-ebute afọ ọsịsa na ọbara ọgbụgba. Ya mere, odi nkpa iri nri ndi juputara na vitamin na mineral na ufodu iwu edeputara ihe ntinye nri. Ya na onye na-edozi ahụ, dọkịta na-achọpụta mkpa onye ọrịa. Nyocha ọbara na-achọpụta erughị eru na ntinye aka nke ọkachamara nri dị mkpa iji mata oke nri.
Kedu Ọgwụ Ọgwụgwọ maka Ọrịa Crohn?
Ọ bụ ezie na enyemaka ahụike dị mkpa n'ịgwọ ọrịa Crohn, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ọgwụgwọ ọzọ dị ka mgbakwunye na nlekọta ha. Ọ bụ ezie na ndị na-ahụ maka ahụike akwadobeghị nke ikpeazụ a, ọtụtụ mmadụ na-eji ha maka uru ahụike ha chere. Dị ka ihe ncheta, ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị usoro ndị a. Usoro ọgwụgwọ ndị kasị ewu ewu na-ewere probiotics, microorganisms bara uru maka eriri afọ. A na-etinyekwa ọgwụ mgbochi n'ọnọdụ nke usoro ọgwụgwọ a. Ihe mgbakwunye nri ndị a ga-adị mma maka ịzụlite ezigbo nje na eriri afọ ma dị na nri dịka asparagus, banana, artichokes na leeks. Maka uru ya, ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa na-atụkarị aro maka mmanụ azụ n'ihi ụba ya na omega-3s. Nke a ọmụmụ bipụtara na 2017 na-ekpughe na abụba a bụ isiokwu nyocha banyere ịdị irè ya megide ọrịa Crohn. Ya mere, a na-atụ aro azụ ndị ọzọ nwere abụba dịka salmọn ma ọ bụ makarel. A na-enyekwa ihe mgbakwunye nri ndị ọzọ dịka ụfọdụ ahịhịa, vitamin na mineral nke nwere ike belata mgbaàmà nke ọtụtụ ọrịa, gụnyere Crohn. Ruo ugbu a, ọ nweghị ihe akaebe sayensị guzobere ọbụlagodi na ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa kwadoro ha. N'etiti ha, a na-agbakwa ume oriri nke aloe vera. Acupuncture bụkwa nhọrọ na-abụghị ọgwụ dị ka ọgwụgwọ nkwado maka ọrịa a. Usoro ọgwụgwọ China a gụnyere itinye agịga na akpụkpọ ahụ iji mee ka isi ihe dị iche iche dị na ahụ a na-akpọ meridian. Dabere na pseudoscience a, omume a ga - ewepụta endorphins na ụbụrụ, homonụ nke na - egbochi ihe mgbu ma na - ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ọgụ, nke ọrịa ọrịa afọ a na-ebelata. Dị ka otu ọmụmụ, omume a metụtara ọgwụgwọ ọdịnala ọzọ, moxibustion nwere ike ibelata mgbaàmà nke ọrịa Crohn. Dika nkwubi okwu sayensi ndi a nke edeputara na 2014, nchikota ogwu ogwu a nke jikotara ike nke agịga ga-ebelata mgbu afo, mbufụt kamakwa afọ ọsịsa. Nsonaazụ ndị na-agba ume ịnwale ọgwụ ndị nna ochie a. Kpachara anya, dịka e kwuru na mbụ, ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị gbasara usoro ọgwụgwọ ndị a n'ihi na ụfọdụ n'ime ha nwere ike imetụta ịdị mma nke ọgwụ ma mepụta mmekọrịta nwere ike ịdị egwu. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọ dị mkpa iji mepụta mmekọrịta nke nghọta na ntụkwasị obi na dọkịta gị na-aga.
Kedu ụdị ịwa ahụ dị iche iche maka ọrịa a?
Na enweghị nrụpụta nke ọgwụgwọ, ịwa ahụ na-atụkarị aro ịgwọ ọrịa a. A na-emekwa ya maka ihe karịrị ụzọ atọ nke ndị ọrịa iji belata mgbaàmà na nsogbu niile na-esite na ha. Ọrụ ndị a dịgasị iche ma ha niile nwere ebumnuche dị iche. A na-eme ọgwụ a mgbe ọgwụgwọ ọgwụgwọ anaghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ mmetụta dị na ọgwụ ndị ahụ siri ike. Stricturoplasty bụ ịwa ahụ nke na-agbasa ma na-ebelata eriri afọ. Ihe mgbaru ọsọ ya: iji belata mmetụta nke ọgwụgwọ ọnya na mmebi anụ ahụ. Ebumnuche nke imebi eriri afọ bụ iwepu akụkụ eriri afọ nke mebiri emebi iji nweta anụ ahụ dị mma. Stoma na-emepụta oghere iji wepu ihe mkpofu mgbe ewepụrụ akụkụ nke eriri afọ ma ọ bụ nnukwu. Nke ikpeazụ nwere ike ịbụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide dabere na oge ọgwụgwọ nke eriri afọ. Ihe colectomy bu mwepu nke akụkụ colon mebiri emebi na proctocolectomy gụnyere iwepu ngwa a yana ikensi. N'ozuzu, usoro abụọ a na-arụkọ ọrụ n'ihi na ịgwọ ọrịa Crohn, ọ dị mkpa ịmepụta oghere n'ime eriri afọ iji wepụ ihe mkpofu. Dị ka ịwa ahụ ọ bụla, ndị a enweghị ihe egwu ma nwee ike ịgụnye nsogbu ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmasị ha bụ iji belata mgbaàmà nke ọrịa.
Kedu ụdị dị iche iche nke ọrịa Crohn?
Thedịdị dị iche iche nke ọrịa Crohn dị isii ma bụrụ ndị ama ama site na ọnọdụ ha. Gastroduodenal bụ nke na - emebi ọrụ afọ na akụkụ akpọrọ duodenium, mmalite nke eriri afọ. Nke a bụ ihe dị obere na ndị ọrịa. Jejunoileitis bụ nke metụtara akụkụ nke abụọ nke eriri afọ [ederede nchịkọta akụkọ: jejunum]. Dị ka ọrịa gastroduodenal, ụdị ọrịa a dịkwa obere. N’ụzọ dị iche, ileitis na-adịkarị. Ọ na-emetụta akụkụ ikpeazụ nke eriri afọ ma ọ bụ ụlọ ahụ. Ileocolitis bụ ihe a na-ahụkarị ma na-emetụta anụ ahụ na ileum na colon. Ọ bụ ụdị ọrịa Crohn na-ahụkarị. Achọpụta nke Crohn bụ ihe a na-ahụkarị na ọ na-emetụta colon. Ọ gụnyere ọnya afọ na nkwonkwo ahụ e kwuru n'elu nke eriri afọ. Ọnọdụ a nwere ike imetụta usoro miri emi nke eriri afọ. Ọrịa Perianal na-akpata fistulas ma ọ bụ njikọ na-adịghị mma n'etiti anụ ahụ. O nwekwara ike ịmepụta ọrịa nke anụ ahụ TGI miri emi kamakwa ọnya na ọnya dị na mpụga akpụkpọ ahụ. Thatdị nke gosipụtara ọtụtụ esemokwu dị n'etiti ndị ọrịa n'ihi na ọrịa Crohn gụnyere otu akụkụ ma ọ bụ karịa nke usoro eriri afọ.
Gịnị bụ ọnya afọ?
N'ịnọchite anya ọdịiche abụọ nke ụdị isii nke ọrịa Crohn, ọnya afọ nwere ike iji ya tụnyere ọrịa colhn ma ọ bụ mbufịk colon inflammation. Nke abụọ bụ ihe kpatara ọtụtụ mgbaàmà. N'etiti ngosipụta anụ ahụ nke colitis kpatara: ọbara ọgbụgba, afọ ọsịsa, ụfụ, afọ mgbu, ịtalata ibu kamakwa ike ọgwụgwụ. Ọ kachasị metụtara ndị dị afọ 15 ruo 35 ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ebute. Ọdịdị ya na otu nwoke na nwanyị na ndị ọka mmụta sayensị enwebeghị ike ịkọwapụta ihe kpatara ya. Ka ọ dị ugbu a, naanị otu ihe na-ebute ọrịa na-arụ ọrụ karịrị akarị. Anomaly nke na - akpata nsogbu nsị nke eriri afọ.
Kedu ihe dị iche na ọnya afọ na ọrịa nke Crohn?
Ọ bụrụ na enwere ike ịme ọkụ abụọ a n'otu oge na ahụ, enwere ihe dị iche na ọnya afọ na ọrịa nke Crohn. Nke mbụ na-emetụta naanị eriri afọ ebe nke ikpeazụ a nwere ike ịmetụta akụkụ niile nke anụ ahụ na-agbari nri, site n'ọnụ ruo na ike. Ọrịa ọgbụgba, n'aka nke ọzọ, na-ebute mmetụta na mpụga nke eriri afọ, nke a maara dị ka akpụkpọ anụ mucous. Colitis nke Crohn nwere ike imetụta ọkwa TGI niile gụnyere nke miri emi. Ọ bụ ezie na ọnya afọ nke ọdịdị ọnya pụtara bụ nanị ụdị nke mbufụt nke eriri afọ, enwere ọtụtụ edemede nke colitis na-akpata mbufụt na mmebi nsia dị iche iche.
Kedu ọnụọgụ nke ọrịa Crohn?
Abụọ dị ka Ntọala Crohn & Colitis (CCF) na Lọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) ịmatakwu banyere ọrịa a. Dị ka ụlọ ọrụ ndị a si kwuo, ndị na-ese anwụrụ ọkụ nwere ike ị twiceụ ya okpukpu abụọ. Ihe omuma ndi ozo: n'ihe banyere ogwugwo ma obu ogwugwo nke oria a, okara nke ndi oria nwere ike banye na nbughari ma obu inwe ihe mgbaàmà di nfe n'ime afo ise nke nchoputa a. N'aka nke ọzọ, 11% nke ndị ọrịa nwere ike ịnwe ọrịa na-adịghị ala ala. Dabere na data sitere na Foundation nke Crohn na Colitis nke America, nleta nde dọkịta 1,1 metụtara ọgwụgwọ na nlekọta nke ọnọdụ a.
Ọrịa Crohn adịghị ike?
Ọ bụrụ n ’ọnọdụ ụfọdụ, ọrịa a anaghị arụ ọrụ nke ọma naanị ma ọ bụrụ na a chọpụta ya n’oge, nke ikpeazụ nwere ike ịkwụsị. N'ezie, enwere nsogbu dị na ọ na-emetụta ọrụ ọkachamara na ndụ onwe onye. Ọrịa Crohn nwekwara ike ịkpata nrụgide n'ihi ụgwọ ego na-eso ya. Ọtụtụ ihe ndị mejupụtara ezigbo nkwarụ kwa ụbọchị. Ọnụnọ nke ostomy, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịbụ na mmalite nke mgbagwoju ebe ọ na-esiri ike iche usoro ọgwụgwọ a na ịgwa ndị gbara ya gburugburu. Ihe mgbaàmà nke ọnọdụ a nwere ike ịnwụ ma ọ nwere ike ibute obi nkoropụ na onye nwere ya nke nwere ike iru uju maka "ndụ nkịtị". Mgbe ọrịa Crohn dị ike, ọ ga-ekwe omume itinye akwụkwọ maka nkwarụ n'ihi na ọ nwere ike igbochi gị ịme ọrụ ọkachamara ma wee nweta ego iji gboo mkpa gị. O di nwute, usoro nhazi a di ogologo ma nwee ike inwe mmuta nke uche nye onye nwere oria a. Ntachi obi na ihu ọkwa ọkwa ahụ chọrọ nkwado ọgwụgwọ kamakwa agụmakwụkwọ iji meghachi omume na mgbaàmà.
Kedu ka ụmụaka si emetụta ọrịa Crohn?
A na - achọpụta ọrịa Crohn n'etiti afọ 20 na 30. Mana, ọrịa afọ na-emetụta ụmụaka. Nke a ọmụmụ gosipụtara na otu onye n’ime mmadụ anọ nwere akara tupu afọ iri abụọ ha. Ọrịa na-egbu egbu naanị na-ahụkarị ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma, na-eme ka o sie ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ọrịa Crohn na ọnya afọ. Ndị dọkịta na-echere ruo mgbe ọnụ ọgụgụ ndị a gosipụtara mgbaàmà ndị ọzọ iji chọpụta ha. Isi ihe kpatara ọrịa a na ụmụaka ji achọ ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị bụ na mgbe a na-agwọghị ya, ọ nwere ike ibute nsogbu dịka ọkpụkpụ na-esighi ike na uto uto. Nsonaazụ ndị a nwere ike ịnọchite anya ezigbo ihe na-akpata nsogbu ụmụaka. Maka nlekọta, ndị dọkịta na-enyekarị ọgwụ nje, aminosalicylates, ngwaahịa ndị sitere n'okike, ndị na-agwọ ọrịa steroid ma na-eduzi mgbanwe nri. Mkpụrụ ndụ ndị a nwere ike ịkpata nsonaazụ dị egwu na ụmụaka. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọ dị mkpa ka nne ma ọ bụ nna bụrụ onye na-esonyere ya na njikwa nke ọrịa a na-adịghị ala ala na-enwe mmetụta nkwarụ.
Nchegbu na ọrịa Crohn. Mmekọrịta dị egwu
a ọmụmụ gosipụtara na nrụgide nwere ike ịbụ ihe na-akpata ntiwapụ nke eriri afọ na ụmụaka na ndị okenye. Nke ikpeazụ a na - agbagha microbiota nsị ma na - akpata ọrịa na - adịghị ike na neuroendocrine. Ihe akaebe zuru oke na ọ dị mkpa maka onye ọrịa Crohn iji belata isi mmalite nke nchekasị maka njikwa ọrịa nke ọrịa ya. Fọdụ ndị na-agwọ ọrịa ọzọ na-ekwukwa banyere ihe ndị na-akpata mmalite nke ọnọdụ ahụ na-eme ka ike na-agwụ mmadụ. Ndị ọrụ a na-ekwu maka ndị mmadụ na-eche na ọ dị ala na ndị isi ma na-enwe iwe iwe, nke nwere ike ịkpalite ọrịa a. Ihe nnọchianya nke na-emetụta ọ bụghị nanị ọrịa Crohn kama nke kwekọrọ na edemede dịka ihe mgbu niile kwekọrọ na mmetụta uche. Ndị ọrụ ibe anyị si na Switzerland webzine Planète Santé jụrụ ya, otu onye ọrịa na-akọghachi mgbanwe ya na dọkịta ya nke kọwaara ya na nrụgide bụ ihe na-akpata ma na ndị ọkà mmụta banyere mmụọ, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na osteopaths nyeere ya aka ịlụ ọgụ ma ghọtakwuo ọrịa ya. Usoro ọgwụgwọ dị mkpa iji zere ọnọdụ a na-adịghị ala ala na mgbaàmà na-emebi mmụọ kwa ụbọchị.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/la-maladie-de-maladie-de-crohn-voici-les-causes-et-symptomes-de-cette-pathologie/
Wakaazi wa Wajir wanufaika na huduma ya bure ya matibabu ya macho - Video
R. Kelly wepụtara mgbe ọ kwụrụ $ 161 na nkwado ụmụaka - Video